Yohimbine HCL ntụ ntụ (146-48-5) hplc ma98% | AASraw SARMS ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Yohimbine HCL ntụ ntụ
Rating: SKU: 146-48-5. Category: Mmekọahụ Mmebi Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Yohimbine HCL powder (146-48-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
Yohimbine HCL ntụ ntụ bụ onye na-agbanye mkpụrụ akwụkwọ alpha. Ọ na-arụ site na ịba ụba ụfọdụ n'ime ahụ, nke na-adaba ụmụ akwụkwọ anya. Ọ na-agbapụta arịa ọbara ma na-eme ka ọbara na-asọba n'ime mpempe akwụkwọ, nke na-enyere aka melite arụ ọrụ erectile. Na yohimbine ntinye ya, ha bu oku na-ere ọkụ, nke kachasị na-emefu abụba n'oge obere oge na-ebu ọnụ.
Yohimbine HCL akpụkpọ vidiyo
Yohimbine HCL ntụ ntụ bụ isi ihe
aha: Yohimbine hydrochloride ntụ ntụ
Usoro Molecular: C21H26N2O3
Molekụla arọ: 354.45
Yohimbine HCL ntụ ntụ eji mee ihe na steroid steroid
A na-akpọkwa ntụ ntụ Yohimbine HCL (CAS 146-48-5) dị ka Yohimbe, Corynanthe Yohimbe, Yohimbe Bark, Pausinystalia Yohimbe.
Yohimbine hydrochloride ntụ ntụ eji
E jiriwo ihe eji eme ihe nke 0.2mg / kg bodyweight iji mee ka abụba abụba na-enweghị mmetụta pụtara ìhè na mkpụrụ obi dịka ọnụọgụ obi na ọbara mgbali. Nke a na - arụpụta usoro nhazi nke:
14 mg maka onye 150lb
18 mg maka onye 200lb
22 mg maka onye 250lb
Ịdọ aka ná ntị na Yohimbine HCL ntụ ntụ
Mmetụta ọjọọ maka yohimbine HCL ntụ ntụ na-eme ọbụna na-atụ aro dosages, gụnyere ọgbụgbọ, mgbu abdominal, dizziness, na nervousness. Ọzọkwa, ọtụtụ ihe mgbakwunye na ịnwe ntụpọ na-acha ọbara ọbara dị na yohimbine hydrochloride na United States ma ọ bụ na enweghị nzaghasị ederede ma ọ bụ doses na labeelu ahụ ezighi ezi.
yohimbine hydrochloride ntụ ntụ bụ mmanụ na-ere ọkụ. Ọ bụ ezie na ọ dị irè, ọ nwere ike ịkpata nchekasị, ọ na - emekọrịta ihe na ọtụtụ ọgwụ, na ntinye akwụkwọ nke mgbakwunye nke nwere ya mgbe ụfọdụ adịghị adaba na ọgwụ ahụ kpọmkwem.
Uhuline HCL ntụ ntụ (CAS 146-48-5)
Yohimbine HCL ntụ ntụ Marketing:
Esi zụta Yohimbine HCL ntụ ntụ (CAS 146-48-5) site na AASraw